Indawo ekhululekileyo enombono omangalisayo wefjord
Indawo yokuhlala ikwi-3.5 km ukusuka kumbindi we-Balestrand, apho kukho iivenkile, i-aquarium, imyuziyam kunye neecafe ezipholileyo. Ukusuka eBalestrand unokuhamba ngesikhephe esinesantya ukuya eBergen. Sinika indawo eninzi kwigadi yethu, phumla kwibhentshi ebekwe "etyeni" ngombono wefjord kunye nelali engummelwane. Uyafuna ukonka? I-grill entsha ilungile :) Sinehlathi lethu, elikhoyo kwiindwendwe, ufuna ukuthatha isilwanyana sakho? Izilwanyana zasekhaya zamkelekile Zifanele iindwendwe ezinemoto.
Ifulethi lixhotyiswe ngokupheleleyo, uya kuziva ngathi likhaya lakho. Le ndlu inamagumbi amabini okulala, omabini anebhedi ezimbini. Ifulethi isandula ukulungiswa. Ukufikelela kwi-intanethi ngesantya esiphezulu esingenamda. Ikofu yamkelekile kunye neti. Igumbi lokuhlambela lokuhlambela umzimba kunye nesomisi seenwele. Ikhabhinethi iseti amanenekazi acocekileyo. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo. Umatshini wokuhlamba izitya uneepodi zokuhlambela. Sinendawo eyahlukileyo yegumbi lokugqoka kunye ne-wardrobe ye-3 umnyango kunye neeshelufu zempahla. Abazali abahlawuleli umntwana ukuya kwiminyaka emi-3 ubudala. Izilwanyana zasekhaya zisimahla kwaye zamkelekile.
Ukutyelela okuphawulekayo kwi-Aquarium e-Balestrand, apho unokubona khona intlanzi yemihla ngemihla ekhethekileyo kunye nezinye izidalwa. Yigalari yezandla yezandla kunye nemyuziyam yaseNorway. Iikhefi ezincinci apho utya ukutya kwasekhaya.
Sikwinkonzo yakho iiyure ezingama-24 / 7 Ukuba undwendwe lunezidingo ezikhethekileyo siya kuzama ukuhlangabezana nazo kangangoko sinako. Iindwendwe ezifika nenja okanye ikati zinokuthenga, okanye zijikeleze yonke indawo zishiya isilwanyana kwinkathalo yethu, simahla, kunye nokuhlala kwesilwanyana sasekhaya nathi simahla.
Sikwinkonzo yakho iiyure ezingama-24 / 7 Ukuba undwendwe lunezidingo ezikhethekileyo siya kuzama ukuhlangabezana nazo kangangoko sinako. Iindwendwe ezifika nenja okanye ikati zinok…
Iilwimi: English, Norsk, Polski
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Balestrand